एडोब इलस्ट्रेटरमा छविहरू कसरी सशक्त बनाउन, सजिलो र छिटो क्रिएटिव अनलाइन
एडोब इलस्ट्रेटरमा छविहरू कसरी सशक्त पार्ने
लोला करील | | डिजाइन उपकरणहरू, Illustrator
जब हामी भेक्टर, हामी के गर्छौं बिटमैपमा रहेको छविलाई रूपान्तरण गर्छ, उदाहरणका लागि jpg वा png ढाँचामा, भेक्टर छवि (SVG) मा। त्यो भन्नु पर्ने हो, हामी पिक्सेल भेक्टरमा रूपान्तरण गर्दछौं.
भेक्टर छविहरूको साथ काम गर्ने केहि फाइदाहरू छन्, यी कुनै पनि विरूपण बिना स्केल गर्न सकिन्छ र तिनीहरू सम्पादन गर्न तयार छन्। यो ट्यूटोरियलमा हामी तपाईंलाई बताउँछौं एडोब इलस्ट्रेटरको प्रयोग गरेर कसरी छविहरू भेक्टरमाइज गर्न सकिन्छ। पहिले, हामी एउटा चित्रण भेक्टोरइज गर्नेछौं, र त्यसपछि हामी फोटोग्राफको साथ प्रक्रिया दोहोर्याउँनेछौं।
1 एउटा दृष्टान्त भेटेराइज गर्नुहोस्
1.1 नयाँ आर्टबोर्ड र खुला छवि सिर्जना गर्नुहोस्
1.2 «छवि ट्रेसिंग» प्यानल सक्रिय गर्नुहोस् र दृष्टान्तमा यसलाई लागू गर्नुहोस्
1.3 तपाईंको भेक्टरलाई सम्पादन योग्य बनाउनुहोस् र पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
2 जब हामी छवि भेक्टरमा के हुन्छ?
एउटा दृष्टान्त भेटेराइज गर्नुहोस्
नयाँ आर्टबोर्ड र खुला छवि सिर्जना गर्नुहोस्
इलस्ट्रेटरमा नयाँ आर्टबोर्ड सिर्जना गरेर सुरु गरौं, त्यसको लागि तपाईंले क्लिक गर्नुपर्नेछ «फाइल», स्क्रीनको शीर्षमा, र "नयाँ" चयन गर्नुहोस्। म यसलाई A4 आकार बनाउन गइरहेको छु र म यसलाई तेर्सो रूपमा राख्न जाँदैछु।
त्यसपछि, हामी चित्रण खोल्नेछौं। तपाईं यसलाई तीन तरिकाहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ:
सिधा फोल्डरबाट छवि तान्दै
प्रेस गर्दै> फाईलहरू> स्थान
सर्टकट सिफ्ट कमाण्ड प्रयोग गर्दै
मैले ईन्टरनेटबाट कुनै दृष्टान्त डाउनलोड गरेको छु र यो त्यो हो जुन मैले प्रयोग गर्ने छु। यदि तपाई पर्याप्त हेर्नुहुन्छ र जुम गर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्नुहुनेछ कि छविमा पिक्सेल छ, जब हामी यसलाई भेक्टोरइज गर्छौं ती पिक्सलहरू हराउनेछन्। म उदाहरण नक्कल गर्न जाँदैछु ताकि तपाईं परिवर्तन र मतभेद देख्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं यस चरणलाई छोड्न सक्नुहुनेछ।
«छवि ट्रेसिंग» प्यानल सक्रिय गर्नुहोस् र दृष्टान्तमा यसलाई लागू गर्नुहोस्
अहिले "छवि ट्रेसिंग" प्यानल खोल्नुहोस्, जुन तपाईंले लुकाउनु भएको हुन सक्छ। इलस्ट्रेटरमा प्यानल र उपकरणहरू देख्नका लागि तपाईंले तिनीहरूलाई "विन्डो" ट्याबमा सक्रिय गर्नुपर्दछ (शीर्ष मेनूमा)। त्यसो भए हामी "विन्डो" मा जान्छौं र सबै विकल्पहरू बीच हामी "छवि ट्रेसिंग" चयन गर्दछौं.
इलस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, र इमेज ट्रेसिंग प्यानलमा हामी सेलेक्ट गर्न जाँदैछौं "रंग" मोड। एन "हेर्नुहोस्", तपाईंले चयन गरेको हुनुपर्दछ "ट्र्यासि result परिणाम"। माथि, तपाईंसँग एक विकल्प छ कि भन्छ "प्रिसेटहरू" र त्यो सानो मेनुमा तपाईंसँग छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। एक वा अर्को छनौट गर्ने सटीकको स्तरमा निर्भर गर्दछ जुन हामी बिटम्याप छवि भेक्टर छविमा परिवर्तन गरेर हेर्छौं। तिनीहरू मध्ये केही हेरौं:
को मामला मा विकल्प,, and र १ colors रंग यो बुझाउँछ अधिकतम रंग सीमा ट्रेसिंग परिणाममा प्रयोग गर्न। यदि तपाईं १ colors रंगहरू लागू गर्नुहुन्छ भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यो दृष्टान्तमा हामी राम्रो परिणाम पाउँछौं। यदि हामी पहिले नै colors र toहरूमा तल जान्छौं भने हामीले केही विवरणहरू गुमाउँछौं र यदि हामी 16 मा जान्छौं भने अझ बढी। आँखामा क्लिक गरेर, "दृश्य" विकल्पको छेउमा छवि ट्रेसि panel प्यानलको दायाँ अवस्थितमा, तपाईं मूल छवि र हामीसँग अहिले रहेको ट्रेसि between बीचको भिन्नता देख्न सक्नुहुनेछ। जुम इन गर्नुहोस् र तपाईले देख्नुहुनेछ कि पिक्सेलहरू हराइसकेका छन्।
हाई-फाई फोटो र लो-फाइ फोटो सेटि usuallyहरू सामान्यतया लागू गरिन्छ जब हामीसँग फोटोग्राफहरू हुन्छन् वा धेरै विवरणहरूको साथ चित्रण, उदाहरण को लागी सरल को लागी यो आवश्यक छैन। तपाईं यसलाई लागू गर्न सक्नुहुनेछ, यदि तपाईंले आवेदन गर्नुभयो भने, उदाहरणका लागि, "कम निष्ठा फोटो" यो पनि राम्रो देखिनेछ।
त्यहाँ धेरै अन्य सेटिंग्स र मोडहरू छन्। यदि तपाइँ "ग्रेस्केल" मोड चयन गर्नुहुन्छ वा यदि "प्रिसेटहरू" मा तपाइँ "खैरो रesहरू" लागू गर्नुहुन्छ भने खैरो टोनमा भेक्टर पाउनुहुनेछ। "कालो र सेतो" मोड वा "स्केच ग्राफिक" पूर्वसेट चयन गर्नाले एक प्रकारको स्केच सिर्जना गर्दछ।
अहिलेको लागी हामी "१ colors रंग" सेटिंग को लागी अप्ट इन गर्न जाँदैछौं।
तपाईंको भेक्टरलाई सम्पादन योग्य बनाउनुहोस् र पृष्ठभूमि हटाउनुहोस्
हामीसँग पहिले नै भेक्टर छवि छ, तर अब म तपाईंलाई एउटा देखाउँछु ट्रिक गर्नुहोस् ताकि तपाईं यसलाई परिवर्तन गर्न र छिटो सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। जब हामीसँग इल्स्ट्रेटरको साथ भेक्टर छवि सिर्जना हुन्छ, जस्तै यो तारा, "प्रत्यक्ष चयन" उपकरण प्रयोग गरेर हामी एch्कर पोइन्टहरू छनौट गर्न सक्दछौं र हामी यसलाई जस्तो चाहन्छौं रूपान्तरण गर्न सक्छौं। अर्कोतर्फ, यदि हामीले भेक्टरलाई सिर्जना गरेका छौं भने हामी केहि गर्न सक्दैनौं।
यसलाई समाधान गर्न दृष्टान्त चयन गर्नुहोस् र माथि मेनुमा जानुहोस् वस्तु> विस्तार। खुल्ने मेनूमा, हामी "वस्तु" लाई चिन्ह लगाउँदछौं र "भर्नुहोस्"। यस उपकरणको साथ, हामीले के प्राप्त गर्छौं कुनै वस्तुलाई सबै कम्पोनेन्टमा विभाजित गर्नु जुन तिनीहरू प्रत्येकलाई स्वतन्त्र रूपले रूपान्तरण गर्न सक्षम हुन। हामी तत्वहरू मेटाउन, रंग परिवर्तन गर्न, तिनीहरूलाई सार्न, स्केल गर्न सक्दछौं ...
यसले तपाईंलाई भेक्टरको पृष्ठभूमि मेटाउन पनि अनुमति दिनेछ। यदि तपाईं चित्रलाई आर्टबोर्डबाट बाहिर सार्नुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यसको सेतो पृष्ठभूमि छ, किनकि तपाईंले प्रत्यक्ष चयन उपकरणको साथ "विस्तार" लागू गर्नुभयो, तपाईं पृष्ठभूमि चयन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई केवल कुञ्जीपाटीमा ब्याकस्पेस कुञ्जी क्लिक गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ।
जब हामी छवि भेक्टरमा के हुन्छ?
ट्यूटोरियलको यस अंशका लागि, मैले एक धेरै उच्च रिजोलुसनको साथ फोटो छनौट गरेको छु, वास्तवमा, मैले पिक्सेल फरक छुट्याउनको लागि धेरै बढाउनु पर्छ। प्रक्रिया अब उस्तै हुनेछ। हामी "छवि ट्रेसिंग" लागू गर्नेछौं, तर यस पटक प्रिसेट १ colors रंगको सट्टामा हामी फोटोलाई उच्च निष्ठा दिइरहेका छौं।
यदि तपाईं मेरो जस्तो छवि छनौट गर्नुभयो भने सम्भवतः तपाईले एउटा सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईलाई छवि रास्टराइज गर्न भनिरहेछ ट्रेसिंग लागू गर्न सक्षम हुन। छविहरू रास्टराइज गर्न, हामी दिन्छौं Ject वस्तु »(शीर्ष मेनूमा ट्याब)>« रास्टराइज »।
सम्भवतः, पहिलो नजरमा तपाईंले कुनै परिवर्तन देख्नुहुने छैन, तर हामी अब फोटो को समायोजन लागू गर्न सक्दछौं उच्च निष्ठा। जब तपाइँ यसलाई लागू गर्नुहुन्छ, अझ राम्ररी हेर्नको लागि जूम इन गर्नुहोस्, तपाइँले देख्नुहुनेछ कि हामीले एक प्रकारको सिर्जना गरेका छौं अति यथार्थवादी चित्रकारी। यदि तपाईं उच्च निष्ठा फोटोको सट्टामा लागू गर्नुहुन्छ कम निष्ठा फोटो, यो ड्राइंग प्रभाव अधिक actenuated गरिनेछ।
"विस्तार गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर, हामीले अघिल्लो दृष्टान्तको साथ गरेझैं हामी रेखाचित्रका केही अंशहरू सच्याउन सक्छौं जुन हामीलाई धेरै बुझ्दैन, यहाँ सम्म कि अधिक अमूर्त रचनाहरू सिर्जना गर्न हामी यसलाई भत्काउन सक्छौं.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Illustrator » एडोब इलस्ट्रेटरमा छविहरू कसरी सशक्त पार्ने
Adobe Premiere Pro र Premiere Rush प्रदर्शन सुधारको साथ अद्यावधिक गरिएको छ